Khilaafka Madaxda Dawladda Soomaaliya - BBC Somali
Khilaafka Madaxda Dawladda Soomaaliya
25 Oktoobar 2014
Saacado kadib markii Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed uu shaaciyay isku-shaandheyn golaha wasiirada qaar ka mid ah, ayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu tallaabdaasi ku tilmaamay mid wax kama jiraan ah.
Madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu sheegay in tilaabadaasi ay ahayd mid aan isaga lagala tashan, islamarkaana aan waafaqsanayn dastuurka. Hadal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa ku eedeeyey Ra'iisul Wasaare Cabdi Wali Sheekh Axmed in uu si isdabajoog ah u soo saaro go'aano tashwiish ku abuuraya geedi socodka dawladnimada iyo wada shaqeynta hay'adaha dowliga ah.
Wasiirada Shaqada ha sii wataan
Kol sii horaysay ayaa ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed waxa uu isku shaandhayntaasi uu xilkii wasaarada Caddaalada iyo Dastuurka ka qaaday faarax Cabdiqaadir oo ay xulufo dhow yihiin madaxweynaha waxaana Faarax Cabdiqaadir loo dhiibay wasaarada xanaanada xoolaha.
Wasiirkii wasaarada Xoolaha Saalim Ibrow ayaa loo dhiibay wasaaradda Caddaaladda iyo Dastuurka.
Image caption Faarax Sheekh Cabduqaadir waxaa loo sheegay in uu sii wato xilkii Wasaarada Caddalaada
Madaxweynuhu waxa uu amar ku siiyay wasiirada in ay sii wataan xilalkii lagu ogaa, wax saamayn ahna aanay ku yeelan warka ka soo baxay Xafiiska Ra'isul wasaaraha
Ra'isul wasaare Cabdiwali Sheekh kama uusan hadlin hadalka madaxweynaha wali, balse Ra'iisul wasaaraha ayaa kol sii horreysay waxa uu sheegay in uu isku-shaandyentaasi u sameeyay si buu yiri 'loo dardargeliyo shaqada xukuumaddu u hayso Qaranka Soomaaliya'.